Ama-FAQ - Kunshan Qiangdi Ukugaya Izinsiza kusebenza Co., Ltd.
Ngingayethemba kanjani ikhwalithi yakho?
1. Wonke umshini uvivinywe ngempumelelo e-QiangDi workshop ngaphambi kokuthunyelwa.
2.Sihlinzeka unyaka owodwa iwaranti yayo yonke imishini kanye nempilo yangemva kokuthengisa.
3. Singavivinya okokusebenza kwakho kwimishini yethu ngaphambi kokufaka i-oda, ukuqinisekisa ukuthi imishini yethu ilungele iphrojekthi yakho.
4. Onjiniyela bethu bazoya efemini yakho ukuyofaka nokususa iphutha kwimishini, ngeke babuye kuze kube yilapho le mishini ikhiqiza imikhiqizo efanelekayo.
Kukuphi ukuphakama kwakho okuqhathaniswa nabanye abahlinzeki?
1. Onjiniyela bethu abangochwepheshe bangenza isisombululo esifaneleke kakhulu ngokuya ngezinhlobo zakho zezinto zokusetshenziswa, amandla nezinye izidingo.
2.I-Qiangdi inonjiniyela abaningi bokucwaninga nokuthuthuka abanolwazi lweminyaka engaphezu kwengu-20, ikhono lethu le-R & D linamandla kakhulu, lingathuthukisa ubuchwepheshe obungu-5-10 minyaka yonke.
3. Sinamakhasimende amaningi amakhulu ku-Agrochemical, New material, Pharmaceutical field emhlabeni wonke.
Iyiphi insizakalo esingayinikeza ukufakwa komshini nokuhlolwa kokuhlolwa? Iyini inqubomgomo yethu yesiqinisekiso?
Impendulo: Sithumela onjiniyela kusayithi lamaphrojekthi lamakhasimende futhi sinikele ngemiyalelo yezobuchwepheshe kanye nokuqondisa ngesikhathi sokufakwa komshini, ukuthunyelwa nokuhlolwa kokuhlolwa. Sinikeza iwaranti yezinyanga eziyi-12 ngemuva kokufakwa noma ezinyangeni eziyi-18 ngemuva kokulethwa.
Sinikeza insizakalo yokuphila kwemikhiqizo yethu yomshini ngemuva kokulethwa, futhi sizolandela isimo somshini namakhasimende ethu ngemuva kokufakwa komshini okuphumelelayo emafektri amaklayenti ethu.
Ungabaqeqesha kanjani abasebenzi bethu ngokusebenza nokunakekelwa?
Impendulo: Sizohlinzeka ngazo zonke izithombe ezifundisayo zobuchwepheshe ukuze sizifundise ukusebenza nokunakekelwa. Ngaphezu kwalokho, onjiniyela bethu bomhlangano wokuqondisa bazofundisa abasebenzi bakho kusayithi.
Imiphi imithwalo yokuthumela oyinikezayo?
Impendulo: Singanikela nge-FOB, i-CIF, i-CFR njll ngokuya ngesicelo sakho.
Imiphi imigomo yokukhokha oyithathayo?
Impendulo: T / T, LC lapho ubona njll.
Itholakala kuphi inkampani yakho? Ngingavakashela kanjani lapho?
Impendulo: Inkampani yethu itholakala edolobheni laseKunshan, esifundazweni saseJiangsu, eChina, idolobha eliseduze kakhulu eShanghai. Ungandizela esikhumulweni sezindiza saseShanghai ngqo. Singakulanda esikhumulweni sezindiza noma esiteshini sesitimela njll.
1. Qinisekisa umkhiqizo ngekhwalithi ephezulu noku-pre-commission ngaphambi kokulethwa;
2. Diliva ngesikhathi;
3. Nikeza isethi ephelele yemibhalo njengezidingo zamakhasimende.
Nikeza ngezinsizakalo ezicabangelayo ukunciphisa ukukhathazeka kwamakhasimende.
1. Onjiniyela abakhona ukusebenzela imishini phesheya kwezilwandle.
2. Nikeza iwaranti yezinyanga eziyi-12 ngemuva kokufika kwempahla.
3. Siza amaklayenti ukuba alungiselele uhlelo lokuqala lokwakha;
4. Faka futhi ulungise inkinga okokusebenza;
5. Qeqesha opharetha bomugqa wokuqala;
6. Hlola okokusebenza;
7. Thatha isinyathelo sokuqeda izinkinga ngokushesha;
8. Nikeza ukwesekwa kwezobuchwepheshe;
9. Sungula ubudlelwano besikhathi eside nobungani.